Shaqaale banki oo adduun lacageed si kama’ ah ugu riday gudaafadda qashinka | HimiloNetwork
Shaqaale banki oo adduun lacageed si kama’ ah ugu riday gudaafadda qashinka
Posted by: Zakariya in La-yaabka February 6, 2017	0 245 Views
Muqdisho – Shaqaale banki ayaa argagaxay kadib markii lacag kaash ah ay ku dareen qashinka – balse qarwaaqsaday gafkooda xilli gaariga lagu daabulo qashinka uu meesha ka dhaqaaqay.
Maamulka bangiga ayaa sheegay in falkani uu soo shaac baxay maalintii Khamiista.
Shaqaalaha ayaa si shil ah waxay lacagta oo dhan 50,000 oo Euro ah – una dhiganta $54,000 – ugu dareen gudaafadda loogu tala-galay in lagu guro qashinka iyo agabyada aan loo baahneyn ee bangiga ka yimaada.
Subaxdii Jimcaha, maamulka bangiga ayaa la xiriiray waaxda nadaafadda iyo bilicda deegaanka iyaga oo uga warramay shilka – weydiistayna kaalmo ay ku gacan siiyaan haddii ay dib u heli karaan lacag iyo in kale.
Si kastaba, kadib baaris qaadatay muddo saacado waxaa suura-gashay in dib loo helo baagag ay ku shaabadeysan yihiin naqshadda bangiga. Markii la furayna waxaa loogu tagay lacagtii la tuhmay inay ku maqneyd xaggooda oo dhan $54,000.
Ugu danbeyn lacagta ayaa kusoo noqotay keydka bangiga, waxaana ay shaqaaluhu awoodeen inay dib u saxaan tirinta xisaabtooda.
Hayeeshe, waxaa la yaabka noqotay ayaa ah in maamulka bangiga ay u sheegeen shaqaalahooda inay tani tahay gef caadiyan ka dhaca Insaanka oo ay shaqadooda si niyad leh ku wadan karaan.
Previous: Marka uu macalinku sababsado geerida ardaygiisa
Next: Fikradaha ay hooyooyinku ka heystaan caadada gudniinka Fircooniga
Ka ganacsiga Dhuxusha
Dayaca iyo Dar-xumida heysata Eeyaha ku nool Soomaaliya